Farcankii qof ayaa koray la ciyaaro Lego, laakiin waa ka filimada Lego oo ay soo noolaaday ugu xiisaha iyo xaraaradda ceelashan yar sida calanka. Keenida jilayaasha nolosha muuqaal gebi ahaanba Lego heysatay, Lego iyo Kiinteistö filimada sii wado in la soo saaray oo la hayo socda weyn. Laga soo bilaabo Star Wars in Batman, waxaa jira filim Lego ah qof walba in uu ku raaxeysto. Hoos waxaad ka heli doontaa toban ka mid ah filimada ugu fiican Lego!
1. Lego Hero Factory: Rise of Rookies ah
The line toy Lego Hero Factory waa mid aad loo jecel yahay ka mid ah caruurta, iyo miniseries in loo waxyooday waxa ay ka kooban tahay afar dhacdooyin. Tani waa filim buuxa dhererka in racfaan ka qaadan doonto in Hero Factory taageerayaasha, ama kuwa kaliya jeclahay wax walba oo Lego. The animation tayo sare leh oo ay maamushaa qiyaas ahaan saacad iyo badh ah, filimka ay tani ku dhacdo daawadayaasha qalbiga ee Rookies ah, iyadoo hogaamiyaha Stormer u baahan yahay si ay u fuliyaan shaqada muhiim ah, iyadoo Rookies cusub sameeyo oo dhan oo ay awoodaan si ay u noqdaan Heroes sidoo.
Film gaaban kale ee taxanaha Hero Factory, Savage Planet waa dhan oo ku saabsan badbaadinta caalamka, kaas oo lagu beddelaa cidla waxashnimo, ka Doctor sixirkii ah. The Heroes (oo ay ku jiraan ugu cadcad Stringer, Stormer iyo ka badan) ayaa khatar ugu jira in lagu halaagnay markay ayaase ah Rocka lumo iyo waxay ku xusan si aad u hesho isaga - iyo badbaadin caalamka halka ay tahay waxa ugu.
3. Star Wars Lego, Empire duqeeyo Out
The taxane Star Wars Lego waxa uu noqday mid ka mid ah mawduucyada Lego ugu fiican u yaqaan oo caan ah si ay taariikhda. Keenida sheekada Star Wars dad yar qaab light oo xigmad leh, Empire duqeeyo Out xiddigaha ma jiro aan ka ahayn Luke Skywalker iyo geesiyaal kale Mucaaradka Alliance kuwaas oo horey u haystay guul ka gaartay Empire. Laakiin waxaa jira howlgalka cusub ee Luke Skywalker iyo kooxda haatan, halka Darth Vader iyo Darth budh dagaalka uu u ansixiyo ka Emperor ah.
4. Lego Star Wars: taariikhda Yoda
New 2014, KOWAAD Yoda waa ugu dambeeyay ee Lego Star Wars sheekada taxanaha ah. Xirmo DVD Tani waxaa ka mid ah laba dhacdooyin: Phantom Gadzhiyev iyo halista ee ku eryan ah. Gadzhiyev Phantom waxa ay diiradda saaraysaa Darth Sidious iyo qorshihiisa uu abuuro super Gadzhiyev oo cusub ku eryan. Jedi Master Yoda iyo ardayda waa in uu isaga joojiyo ka hor inta ay goori goor tahay. In halista ah ee ku eryan ah, clones badan Jek loo abuuray, laakiin Jek-14 ma xiiseynayo. Tani waa meesha Anakin Skywalker u baahan yahay inuu hanuuniyo ardayda Padawan guusha.
5. Star Wars Lego: khatartan Padawan ayaa
In kasta oo ilaa xad gaaban ee 22 daqiiqo oo kaliya, filimkan waxaa ka buuxa oo xiiso leh iyo caruurta Waxa lagugu dhiirigalin doonaa in ay daawadaan marar badan in ka badan. Madadaalo wuxuu ku bilaabmayaa Yoda waa hage safar ay u farabadan oo dhallinyaro ah Jedis ah, laakiin waxaa jira dhibaato ku qabaan ciidanka iyo in uu isku dayi iyo badbaadin Jamhuuriyadda. Laakiin mid ka mid ah da 'yarta Jedi ayaa dusay saaran markabka - taas ayaana xiiso leh runtii bilaabo!
Ninjago ayaa lagu soo duulay oo ay ciidamada lafaha She'ool ah in this film laba qayb Lego, hogaaminayo Eebaha Garmadon. Waxa ay isku dayayaan in ay hesho ka mid ah artifacts xoog badan yahay, Afar Hubka ee Spinjitzu. Afar nin oo dhalinyaro ah waxay u baahan yihiin in la tababaray tahay Ninja ee Spinjitzu si ay kor ugu istaagi kara iyo dagaal ka dhan ah ciidamada awooda badan ee Gardadon, ka hor inta ay goori goor tahay.
7. Lego: The Tacaburka ee Lidka Powers
Mid ka mid ah dhererka feature dheer ee filimada Lego, ayaa Tacaburka ee Lidka Powers waa dhan oo ku saabsan sahamisa oo ku dhisayow, AWOODDA Lidka. Isaga iyo saaxiibbadiis u tago on tuurnimo in meeraha Police Space ka dibna ku saabsan in Ashlar, adduunka Dr Makumbe. Ujeedadoodu waa inay caawiyaan Boqorka Dhaxlay dib ugu guuleysto boqortooyada ka Mallock Malgin ah; saaxir sharka.
8. Lego Batman: Movie The - DC Super Heroes midoobaan
Mid ka mid ah filimada ugu caansan Lego waa Lego Batman: DC Super Heroes midoobaan. Iyada oo fara badan garoomada iyo kaftan, theme Batman waddaa oo dhan filimka, laakiin hab u caruurta weli awood u yeelan doonaan in ay qabsado on inay storyline ah. Waxaa jira xitaa waa muuqaalka ah ka soo Superman, taas jeestay galay geesi- Lego biimayn sida kale ma.
9. Lego warkii Chima: The Power of Chi ah
Tani movie Lego waa dhan oo ku saabsan nooca, xoolo sida characters bilowday. Waxaa jira qabiil xoolaha kala duwan, iyadoo Three Lions iyadoo ay ciidamada awood badan. Si kastaba ha ahaatee, Chi, ama xoogga dabiiciga ah, waxaa lagu tuuray jahawareersan, marka dhacdooyinka horseedi khilaafaadka u dhexeeya qabiilooyinka, oo ay ku jiraan Lions iyo Yaxaasyada. Carar ku dhowaad 45 daqiiqo, Power of Chi hayn doonaa kids negaanaya shaashadda si aad u ogaato waxa sida darafyadiisa oo dhan.
Movie Lego Tani waa calaamad cusub ee 2014 iyo waxa uu caddeeyay in ay aad u jecel yihiin dhegeyste. Waxaa xiddigaha codkooda labada ciyaaryahan xiiso leh ee Chris Pratt iyo Will Ferrell ah, iyo sidoo kale xiddigaha kale oo badan sida Liam Neeson, iyo Morgan Freeman. Dhagarta ah ee filimkan daba noqonayaa qof xun kaasoo goolka of kooleynaya caalamka Lego meesha waxba abid awoodi doonaan in ay mar kale soo guuraan, halka Emmet, shaqaale dhismaha Lego fudud, waa dabeecadda in loo baahan yahay si loo badbaadiyo qof kasta - laakiin uma badna shakhsiyadda ayaana ka dhigtay filim si xiiso leh. The Movie Lego laga iibsan karaa DVD ah iyo pack Combo Blu-ray ultraviolet.
Top 10 DVD Yoga Best bilowga ah
> Resource > Video > Top 10 Lego Movie DVDs for Kids